Home Wararka Al-shabaab oo Noqday Ururka ugu halista Badan Qaarada Afrika
Al-shabaab oo Noqday Ururka ugu halista Badan Qaarada Afrika
Sida uu qoray Wargeyska the independent ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa sheegay in ururada argagaxiso ee kadhisan guud ahaan qaarada Africa haatan mida ugu halista badan ay tahay alshabaab.
Alshabab oo markiisii hore ka aasaasmay Somaaliya sanadii 2006 dii magac ahaan looyaqaana Alshabaab oo ah eray carabi ah oo micnihiisu yahay Dhalinyaro ama dhaq dhaqaaqa dhalinyarada majaahidiinta ayaa weeraro dhiig fara badan kudaatay waxaa ay kageysteen Guud ahaan soomaaliya iyo dalka kale ee dariska la ah ee Kenya.
Wargeyska ayaa soo xiganaya weerarkii westigat Mall iyo jaamacada gaarisa ee dalkaasi Kenya kuwaa oo lagu dilay macalimiin iyo arday wax kabaraneysay jaamacadaasi.
Alshabab iyo ururka Boko-haram ee ka dagaalama dalka Nigeria iyo ururuka kale ee layiraahdo al-Qaeda in Islamic Maghreb ee kadagaalama dalka Algeria ayaa larumeysan yahay in xariir dhow ay leeyihiin Shababka garabkooda kadagaalama koonfurta soomaaliya in aragti ahaan ama fikirba ay iska agdhow yihiin.
Xarakada alshabab ayaa tiro ahaan dagaalyahanada ay heystaan lagu qiyaasaa inta udhaxeysa 7,000 ilaa 9,000 oo askari oo kabar bardagaalama alshabab iyadoona haatan uu hogaaminayo Ninka lagu magacaabo Ahmad Omar Abu Ubaidah ee mudooyinkii ugu dambeeyay ay soo baxayeen in uu geeriyooday kadib markii xanuunka Cansarka kudhaca caloosha uu mudo laxanuun sanayay inkastoo aanan si rasmi ah loo hubin arimhaasi ama wax war ah oo xaqiijinayo aysan kasoo bixin alshabab.
Mudadii ay soomaaliya ilaa iyo haatan alshabaab waxaa soo maray dhowr hogaamiye oo ay kamid ahaayeen Ahmed Abdi Godane iyo ayman Al dhawahiri iyo godane oo larumeysan yahay in diyaarado ay lahaayeen marekanka ay duqeyn ay kafuliyeen goobo ay kuxooganaayeen Xarakada Alshabaab uu kugeeriydooday duqeyntaasi haatan waxaa madax u ah Ahmad omar oo looyaqaan Abu ubaidah.
Previous articleQM oo ku Eedeysay Dowlada Soomaaliya bur burinta Nidaamka Dalka
Next articleWasiiru Dowlaha W. Maaliyadda oo ka hor yimid Wasiirka Maaliyadaa